Ụgbọelu ikuku na-agba ọsọ ọsọ ọsọ kacha mma ngwaahịa China Manufacturer
Nkọwa:Ngalaba na-arụ ọrụ ngwa ngwa,Ọnụ Ụzọ Ámá Na-agba Ọsọ ọsọ,Oghere Ọnụ Ahịa
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọdịdị Aluminom Elu Elu Ọnụ Ụzọ > Ụgbọelu ikuku na-agba ọsọ ọsọ ọsọ kacha mma ngwaahịa
Ụgbọelu ikuku na-agba ọsọ ọsọ ọsọ kacha mma ngwaahịa
Eji ọrụ mmanye dị maka ngwa buru ibu nke nwere ike itinye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na-ahụ maka ọrụ iji kwado ihe niile chọrọ.
A na-eji ọnụ ụzọ dị elu karịa ebe a na-ebugharị ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma jiri aka na-agagharị, a na-emeghe ọnụ ụzọ a na-emeghe oghere na mpaghara ebe ọnụ ụlọ. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya.
Usoro ntinye aka na USB na-enye nwayọ na-aga n'ihu n'ihu ọrụ maka ụzọ nrịba ama.
Maka ihu igwe kachasị mma na-ekpuchi oghere ọnụ ụzọ nke nwere ngwongwo na-ejikọta ọnụ na ijikọta akwa dị elu na-ekpuchi ogologo nke panel ahụ.
Ọnụ ụzọ dị mgbagwoju anya bụ ihe àmà na-egosi na ihu igwe na ihu igwe, na-emepụta ụzọ mpụga dị elu iji mezuo taa. Mgbe a na-akpọchi ọnụ ụzọ, ha adịghị emetụ aka ka ha na-ekewapụ. Nke a na-ejikọta ngwa ngwa na-agbakọta ngwa ngwa na n'elu-nkezi pụrụ ịdabere.
Uzo a na-eme ka ọ dị ntakịrị na-eme ka onye ọ bụla nwee ike ịme ya ngwa ngwa ma dozie ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọbụna na-enwe ihe karịrị 150,000 ụzọ owuwu ụzọ n'afọ ọ bụla, nhazi nke oge a bụ ihe dị ala ala.
Nnukwu ụlọ nkwụsị na-agba ọsọ dị elu nke Turbine Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Turbo High Speed ​​Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ na-agba ọsọ ngwa ngwa nke Turbine Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe Kpọtụrụ ugbu a
Akpanaka ikuku nke akpukpọ nke elu-igwe Kpọtụrụ ugbu a
Turbo Aluminum Alloy Roller Shutter Door Kpọtụrụ ugbu a
Ngalaba na-arụ ọrụ ngwa ngwa Ọnụ Ụzọ Ámá Na-agba Ọsọ ọsọ Oghere Ọnụ Ahịa Ntugharị na-arụ ọrụ ngwa ngwa Ngwa ngwa ịgba ọkụ ngwa ngwa Ogwe aka na-arụ ọrụ na akpaaka PVC na-arụ ọrụ na ngwa ngwa ngwa ngwa Nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa